होमपेज / शुक्रबार / समस्यामा अल्झिएको प्रेम
समस्यामा अल्झिएको प्रेम	05 May 2013 आइतबार २२ बैशाख, २०७०
किशोर नेपाल	Be the first to comment! 12345 (4 votes)
सुयशको जीवनमा मायाको घाम लाग्न–लाग्न खोज्थ्यो, अनि कालो बादल आएर ढपक्क छोपिहाल्दथ्यो। पर्सन्यालिटी त उसको पनि छ्या भन्ने खालको थिएन। रामेश जस्तो हंकी नभए पनि औसत केटाहरूभन्दा अलि माथि नै थियो ऊ। एट्टिच्युड प्रोब्लेम भने खुब थियो उसमा। साथीभाइसँग हिँड्दा बढी नै पोज मार्ने बानी थियो उसको। कानमा इयरफोन छुट्दैनथ्यो। गीतको सोखिन थियो ऊ। पुराना हिन्दी गीतमा निकै रमाउँथ्यो। महिनैपिच्छे मोबाइल फेर्ने सोख थियो उसको। कान्तिपुर शहरमा भर्खर–भर्खर ब्लुटुथ आएको बेला उसले पनि त्यो यन्त्र कानमा लगाएको थियो। अमेरिकाबाट देश घुम्न आएका उसका काकाले 'के भिरेको त्यो कानमा? अमेरिकामा त लेबर काम गर्नेले मात्रै भिर्छन् यस्तो त!' भनेपछि उसले कानबाट ब्लुटुथ झिकेर थन्क्याइदिएको थियो।सुयशले मन पराएका केटीहरूमा किमिला पहिली थिइन। अघिल्लो न्यू इयर्स इभसम्म ऊ हेलेनाको पछि लागेको थियो। हेलेना फास्ट थिई– स्टडीमा पनि र लाइफ स्टाइलमा पनि। सुयशभन्दा अलि म्याचोर्ड देखिन्थी। उमेरकै हिसाबले त ऊ छिप्पिइसकेकी थिई। उसको यौवनलाई धानेको थियो मेकअपले। हेलेनालाई रिझाउन सुयशले निकै मेहनत गरेको थियो। उसका लागि ड्रेसअपदेखि कस्मेटिक्ससम्म सुयशले नै धानेको थियो। उनीहरू सँगै रेस्टुराँजान्थे र भोड्का तान्ने गर्थे। भोड्का चढ्न थालेपछि हेलेना सुयशको कपाल सुमसुम्याउँथी र भन्थी, 'ओ माई ह्यान्डसम लभ्ली क्याट! ओ माई बेबी!' यत्तिमै मख्ख पर्थ्यो सुयश। एक साँझ भोडका पिउँदै गर्दा यस्तो भयो कि हेलेनाले सुयशसँग आउटिङको प्रस्ताव राखी। सुयश दंग पर्‍यो। उनीहरू साँझ झमक्क परेपछि बाइकमा लागे धुलिखेलतिर। शहरमा मापसे आतंक फैलिएको थिएन। दिन पातलिँदै थियो। सुयशको अनुहार हेलमेटमा लुकेको थियो भने हेलेनाले स्कार्फलाई मास्क बनाएकी थिई। पहिचानको खतराबाट उनीहरू मुक्त थिए। यो आउटिङपछि सुयश र हेलेनाको दोस्ती अचानक नै पातलियो। हेलेना टाढिन थाली सुयशसँग। सुयश आफैँ पनि तर्किनथाल्यो हेलेनासँग। जाडो छल्न सुयशका मम्मी–पापा मधेस झरेपछि ऊ मालतीतिर तानियो। मालती सुयशको घरमा थिई, बितेका तीन वर्षदेखि। घरमा उसको हैसियत डोमेस्टिक हेल्परको भन्दा माथि र सुयशको भन्दा तल थियो। हेलेनाजस्तै मालती पनि अलिकति म्याचोर्ड देखिन्थी। मम्मी–पापा हिँडेको दोस्रो दिन साँझ सुयशले मालतीसँग आँखा जुधाउँदै भन्यो, 'चम्पी गर्देऊ न।' मालती मख्ख परी। उसले सुयशको कोठाबाट हेयर अइल लिएर आई र उसको तालुमा तेल ठोक्न थाली। सुयशको पूरै शरीर सेन्सेटाइज्ड भयो। मालतीले पनि रमाइलो अनुभव गरेकी थिई। सुयशको यो सम्बन्ध पनि तीनचार दिनमै पातलियो। अकस्मात् नै मालती ऊसँग तर्किन थाली। विन्टर भ्याकेसन सुरु भएपछि मालती घरतिर लागी र सुयश पनि मधेसतिर लाग्यो। कलेज खुलेपछि फर्केको सुयशले धेरै कुरा बदलिएको पायो। उसको बेस्ट फ्रेन्ड निरूप र सुमनले कलेज छाडेका थिए। हेलेना फुड टेक्नोलोजी पढ्न स्कलरसिप पाएर फिलिपिन्सतिर लागेकी थिई। नयाँभर्नामा आएका कोही पनि त्यति फास्ट–फरवार्ड थिएनन्। सुयश निकै डल फिल गरिरहेको थियो।सुयशको मन किमिलामा बसे पनि किमिलाको आँखामा कतै चढेको थिएन सुयश। लाइफस्टाइलका कारणले मात्रै हैन, विचारले पनि उदार थिई किमिला। सुयश धन–पैसाले सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्थ्यो। यो हल्काफुल्का जमानामा पनि घाँटीमा सुनको मोटो सिक्री, हातमा सुुनको ब्रासलेट, आँखामा पोलो गग्स– सुयशको व्यक्तित्व भद्दा देखिन्थ्यो। ऊ भने यसैलाई सौन्दर्य ठान्थ्यो। उसको पुर्ख्यौली त्यति सम्पन्न होइन। मधेसमा चारपाँच बिघा जग्गा हुँदैमा मानिस सम्पन्न पनि त हुँदैन। वास्तवमा सुयश नवधनाढ्य परिवारको प्रतिनिधि पात्र थियो। उसको पापा जिल्लामा सानोतिनो ठेकेदारीको काम गर्दागर्दै ठूला ठेकेदार बनेका थिए। पैसा कमाएपछि मान्छेमा अहंकार त चढ्ने नै भो!सबैसँग बोल्ने, खाने, रमाइलो गर्ने चुलबुले स्वभावकी किमिलाले सुयशसँग चिनजान भएकै दिन मुख बटारेकी थिई। सुयशको घाँटीमा लर्केको सुनको मोटो सिक्री देख्नेबित्तिकै उसको पारा चढेको थियो। साँझ क्याफेमा साथीहरूसँग उसले सुयशको सिक्रीलाई जोक बनाउँदै भनेकी थिई, 'सुनको दाम्लोले बाँध्दैमा भैँसी कहिले मान्छे हुने हो र?' सुयशलाई साँच्चीकै जोक बनाउने विचार गरेर किमिलाको ग्रुपले भोलिपल्ट सुयशलाई क्याफेमा बोलायो। सुयश मख्ख पर्दै क्याफे पुग्यो। मेचमा राम्रोसँग बस्नसम्म पनि नबसी निकै बडप्पन देखाउँदै उसले अनाउन्स गर्‍यो, 'आज मेरो टि्रट।' केटीहरूले उसको बडप्पन मन पराएनन्। इसारा–इसारामै कुरा भयो उनीहरूबीच। केटीहरूले विभिन्न खानेकुराको अर्डर गरे। सबै खाइसक्ने कुरै थिएन। त्यसपछि कफीको पालो आयो। केटीहरूले कोल्ड क्यापचिनो मगाए, सुयशले एस्प्रेसो। वेटरले उसका अगाडि सानो कपमा एक घुट्को कफी ल्याएर राखिदियो। उसले त्यो कफी पिएको मात्र के थियो, तीतो न तीतो स्वादले रन्थनियो। सधँै रामचाको चियापसलमा मेसिनले गरर्र पारेको दुधिलो र गुलियो इन्स्ट्यान्ट एस्प्रेसो कफी पिइरहेको केटोले के धान्न सक्थ्यो एस्प्रेसो! सुयशले मुख बिगारेको देखेर केटीहरू खित्का छाडेर हाँस्न थाले। आठ हजार रुपैयाँको बिल तिरेर आफू दोहोरो बेबकुफ बनेको उसले बुझ्नै सकेन।किमिलाको इन्ट्रेस्ट आफूमा नभएको सुयशले बुझ्नै सकेको थिएन। प्रायःजसो ऊ किमिलालाई टि्रट दिन्थ्यो। किमिला पनि फोेगटको खाना छाड्दैनथी। रामेश र किमिलाका बीचको प्रेम भाव देखेपछि उसको मनमा चिसो पसेको थियो। उसले आफ्नो भाग्यमा गर्लफ्रेन्ड नै नभएको सोच्न थालेको थियो। यथार्थ पनि त्यस्तै थियो। ऊसँग दुई घण्टा बिताउने केटीहरू पर–पर–पर भैहाल्थे।क्रमशः Tweet Leaveacomment Message *
यस्तो होस् कांग्रेसनेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा चल्दै छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । देशभर तथा शुभेच्छुक संगठनबाट समेत गरी ३ हजार १ सय...	बलात्कारीलाई १५ सय वर्ष जेल सजायकुख्यात बलात्कारी अल्बर्ट मोराकले थुप्रै महिलाको जीवन बर्बाद पार्योु। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्ग उच्च अदालतले उसलाई १५ सय ३५ वर्ष जेल सजाय दिएको छ।	समात्ला निमोनियालेयतिबेलाको मौसम अत्यधिक चिसो छ। जाडोको यो समयमा श्वासप्रश्वास नलीसम्बन्धी रोग बढी मात्रामा देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिका, वृद्ध तथा गर्भवती र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसलाई जाडोको यो समयमा धेरै...	उपयोगी एप्सलोडसेडिङ एपएफ वनसफ्ट कम्पनीको मोबाइल एप्लिकेसन विभागले बनाएको लोडसेडिङ एपले नेपालीको दिनचर्यालाई केही सहज बनाएको छ। समूहअनुसार बत्ती जानुभन्दा १५ मिनेटअघि सूचना दिने यो एपले दैनिकी सहज बनाएको कम्पनीका प्रमुख...	कांग्रेसभित्र 'प्यारालाइज्ड' लोकतन्त्रआफूलाई 'लोकतन्त्रको पर्याय' ठान्ने नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान र संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन मिति पर सार्ने चाँजोपाँजो मिलाएको छ। निर्धारित मिति पटक–पटक सार्दै कांग्रेसले असोज २...	तारिफमा तैरिरहेकी तेरियानेपाली चेली तेरिया मगरले भारतीय टेलिभिजन जीटीभीको डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स, तेस्रो संस्करणको उपाधि जितेकी छिन्। उनले केबी कप, १० लाख भारु र थुप्रै आकर्षक पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी...	'रातारात हिट हुन खोज्नु मूर्खता हो''मनै त हो' एल्बमले मनमा कत्तिको शान्ति दिँदै छ?दिइरा'छ। भर्खर दुई महिना भयो एल्बम निकालेको। मिडियाले खुब सपोर्ट गरेको छ। एकदम राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु। सार्कः आपसी अविश्वासको साझा मञ्चनेपालमा सन् २००२ को जनवरी २–४ मा आयोजना गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को एघारौँ शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परभेज मुसर्रफको प्रतीक्षा काठमाडौँमा जम्मा भएका...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...